Abenzi beServo Motor Magnet kunye nabathengisi | Horizon
Imagnethi yeservo okanye umazibuthe weNeodymium wemoto ye-servo inemigangatho yayo ekhethekileyo kunye nokusebenza okuphezulu ukuhlangabezana nemfuno engqongqo esemgangathweni yeemoto ze-servo. Imoto yeServo ibhekisa kwimoto yombane elawula ukusebenza kwezinto zoomatshini kwinkqubo ye-servo. Sisixhobo esitshintsha ngokungangqalanga kwisithuthi esincedisayo. Isithuthi se-servo singenza ulawulo lube nesantya esichanekileyo kunye nokuchaneka kwesikhundla, kwaye sinokuguqula isandi sevolthi kwi-torque nakwisantya sokuqhuba into yolawulo. Isantya se Rotor ye-servo motor ilawulwa ngumqondiso wokufaka kwaye unokusabela ngokukhawuleza.
Oko isebe le-Indramat laseRexroth lasungula ngokusesikweni i-MAC yemagnethi esisigxina ye-AC servo motor kunye nenkqubo yokuqhuba kumboniso wezorhwebo waseHannover ngo-1978, oku kuphawula ukuba esi sizukulwana sitsha setekhnoloji ye-AC servo singene kwinqanaba elifanelekileyo. Phakathi kunye nasekupheleni kweminyaka yee-1980, inkampani nganye yayinoluhlu olupheleleyo lweemveliso. Imarike yonke ye-servo ijika kwiinkqubo ze-AC. Uninzi lweenkqubo ze-servo zombane ezisebenza ngombane ophezulu zisebenzisa umazibuthe osisigxina we-AC servo motor, kwaye umqhubi olawulayo ubukhulu becala wamkela inkqubo ye-servo yedijithali epheleleyo ngokubekwa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Kukho abavelisi abaqhelekileyo abanjengoNokia, iKollmorgen, iPanasonic, iYaskawa, njl.
Ngenxa yokusebenza ngokuchanekileyo kwemoto ye-servo, inemfuno engqongqo malunga nokusebenza ngokuchanekileyo kunye nokusebenza okuphezulu, okuxhomekeke ikakhulu kumgangatho weemagnethi zeNeodymium zeemoto ze-servo. Ngenxa yoluhlu olubanzi lweepropathi zemagnethi eziphakamileyo, umazibuthe we-Neodymium wenza ukuba i-servo motors ibenobunzima obuphantsi kunye nobukhulu obuncinci xa kuthelekiswa nezinto zemagnethi zemveli, ezinje ngeemagnethi zeFerrite, iAlnico okanye iSmCo.
Iimagnethi ze-servo motor, okwangoku i-Horizon Magnetics ivelisa uthotho lwamabakala okuphela aphezulu kwiimagnethi zeNeodymium, ezinje nge-H, SH, UH, EH kunye ne-AH ezineempawu ezintathu ezilandelayo:
1.Ukunyanzeliswa okuphezulu kwangaphakathi Hcj: phezulu ukuya kwi> 35kOe (> 2785 kA / m) eyonyusa umazibuthe wokumelana nemagnethi kunye ne-servo motor uzinzo ekusebenzeni.
Ubushushu obuguquliweyo obusezantsi obungaphantsi kwe-2: ezantsi ukuya kwi-α (Br) <-0.1% / ºC kunye ne-β (Hcj) <-0.5% / whichC eyonyusa uzinzo lobushushu bemagnethi kwaye iqinisekise ii-servo motors ukuba zisebenze ngozinzo oluphezulu.
Ukwehla kobunzima obuphantsi: ezantsi ukuya kwi-2 ~ 5mg / cm2 kwimeko yovavanyo lwe-HAST: 130ºC, 95% RH, 2.7 ATM, iintsuku ezingama-20 ezonyusa umazibuthe ukumelana nokunyusa ukwandisa ixesha lokuphila kweemoto ze-servo
Egqithileyo Umtsalane Magnet
Okulandelayo: Imibala yeMagnetic Push Pin
I-Magnetic Stepper yeMagnethi
Umgama weemoto eziMagnethi